सबै बालबालिकालाई विद्यालय ल्याऊ – News Portal
सबै बालबालिकालाई विद्यालय ल्याऊ
April 16, 2019 epradeshLeaveaComment on सबै बालबालिकालाई विद्यालय ल्याऊ
नयाँ शैक्षिक वर्ष सुरु भएसंगै भर्ना अभियान कसरी सञ्चालन भइरहेको छ ? भन्ने सबैमा चासो छ । कतिपय विद्यालयहरुले विभिन बहानामा अभिभावकहरुलाई समेत सताई रहेको पनि सार्वजनिक भएको छ । विद्यालय सञ्चालक समिति, ब्यवस्थापन समिति, शिक्षक तथा कर्मचारीहरु योजना अनुसार विद्यार्थीको भर्नाका लागि घर–घरसम्म पुग्ने गरेका छन् । निजी विद्यालयहरु बढी नै यो अभियानमा सक्रिय भए पनि सामुदायिक तथा सरकारी विद्यालयहरु यो अभियानमा कम देखिरहेका बेला प्रदेश टुडेको नियमित स्तम्भ टुडे राउण्ड टेबलमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने यस्ता क्रियाकलापहरु उचित छन् या छैनन् ? यसले प्रभाव पारेको सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावहरु के कस्ता हुन सक्छन् ? भन्ने विषयमा आधारित रहेर जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहका शिक्षा शाखा तथा सरोकार राखने जनप्रतिनिधिसँग सोधेका छौं ।
भर्नाका नाममा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा
शिक्षा महाशाखा प्रमुख
भर्नाको विषयमा भन्नुपर्दा भर्ना अभियानका कार्यक्रम जिल्लामा मात्र नभई अन्य स्थानहरुमा पनि चलीरहेकै हुन्छ । विद्यार्थीलाई भर्ना गर्नु प¥यो है विद्यालयमा भनेर अभिभावकहरुलाई सचेत गराउँदै भर्नाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नु राम्रो हो ।
तर त्यहि भर्नाका कार्यक्रमलाई घरदैलो अभियान भन्दै विद्यालयको प्रचार गर्ने तरिकाले प्लेकार्डहरु बोक्दै, बाँड्दै हिड्नु गलत हो । कुनै पनि विद्यालयमा विद्यार्थीले आफ्नो ईच्छा र चाहना अनुसार विद्यालयमा भर्ना हुन पाउँछ । त्यो अनिवार्यता छ । तर विद्यालयमा विद्यार्थी वढाउने तरिकाले विद्यार्थी भर्ना गर्ने काममा लाग्नु त्यो राम्रो होइन् ।
यदि विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरता राम्रो छ भने विद्यालय सञ्चालकहरु, शिक्षक तथा कर्मचारीहरु त्यसरी घर–घरमा पुग्नै पर्दैन । उनीहरुको शैक्षिक वातावरण, शैक्षिक केन्द्र र त्यसको सेवा सुविधाका बारेमा पूर्व विद्यार्थी र अभिभावकहरुले प्रचार गरिरहेका हुन्छन् ।
व्यापारिक तरिकाले विद्यालयका भर्ना कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुहुँदैन । त्यसमा हामी पनि सजक हुन आवश्यक छ । कसैले फकाउँदैमा आफ्ना छोराछोरीलाई भर्ना गरिहाल्नु पनि त गलत हो नि ? त्यो त अभिभावकले सोच्नु पर्दछ ।
तर विभिन्न तरिकाले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्दै होडबाजी गर्दै भर्ना अभियान सञ्चालन गर्नु सबैका लागि नकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नु हो । यसले विद्यालय र शिक्षकहरुको छविलाई समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ । तर कुनै पनि विद्यालयले विगतमा गरेका काम र क्रियाकलापको आधारमा भद्र भएर भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्दछ भने त्यो फेरी सकारात्मक हो ।
किनभने विद्यार्थीहरुको नतिजाको आधारमा उनीहरुको अतिरिक्त क्रियाकलापको सहभागिताका आधारमा समाजमा विद्यालय प्रतीको सकारात्मकताका आधारमा विद्यालयको परिचय दिदै भर्ना कार्यक्रमलाई अभिभावक र विद्यार्थीको घरदैलो सम्म पु¥याउँछन् भने त्यो राम्रो हो । त्यसमा कसैले केही भन्दैन ।
सिकाइका कुराहरुलाई साटासाट गर्दै भर्ना कार्यक्रम अगाडि बढाउन निजी मात्र होईन सामुदायिक विद्यालयले पनि पाउँछन् । तर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नु विद्यालयका लागि राम्रो होइन ।
सामुदायिक विद्यालयको विरोध गर्नु गलत
भर्ना अभियानलाई विद्यार्थी र अभिभावहरु समक्ष लैजाने क्रियाकलापहरु पहिलेदेखि नै भए गरेका हुन् । तर कुनै पनि निजी विद्यालयले सरकारी विद्यालयहरुप्रति विपक्षी भएर आफ्नो विद्यालयको प्रचार गर्नेतर्फ लाग्छन् भने त्यो एकदम गलत हो । किनभने प्रायः सामुदायिक विद्यालयहरु यसरी विद्यार्थी माग्दै विद्यार्थी र अभिभावकको घरदैलोसम्म पुग्ने गरेका छैनन् । यताकता गएका होलान् त्यो छुट्टै कुरा हो । तर यो बढीभन्दा बढी निजी विद्यालयहरुमा देखिरहेको छ ।
शिक्षा ऐन २०२८ शिक्षाका नीति नियमहरुलाई स्पष्ट पार्न सक्यो भने सायद यस्तो नहोला । किनभने निजी विद्यालयहरुप्रति ऐन आएको छैन् । एउटै व्यक्ति दुईतिर खुट्टा भने जस्तै यहाँका निजी विद्यालयहरुमा रहेका सञ्चालक, कर्मचारी, शिक्षक शेयर सदस्यहरुका कारणले यस्तो भएको हो । जसका कारण अहिले सबैलाई अन्यौल पारेका छन् ।
निजी विद्यालयहरुले आफूले उपलव्ध गराएका सेवा सुविधाका बारेमा सबैलाई जानकारी गराउन त पायो । तर विद्यार्थी र अभिभावकहरुलाई फलानो विद्यालय यस्तो उस्तो भनेर भर्ना गर्ने वातावरण बनाउनु सरासर गलत हो ।
सरकारी अर्थात् सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरुको शैक्षिक अवस्था कमजोर छन् भन्न पनि मिल्दैन र निजी विद्यालयमा पनि विद्यार्थीहरु सबै पास हुने गर्दछन् भन्न मिल्दैन । निजी विद्यालयहरुले आफूले उपलव्ध गराएका सेवा सुविधाका बारेमा सबैलाई जानकारी गराउन त पायो । तर विद्यार्थी र अभिभावकहरुलाई फलानो विद्यालय यस्तो उस्तो भनेर भर्ना गर्ने वातावरण बनाउनु सरासर गलत हो ।
विद्यालय–विद्यालयबीचको होडबाजीलाई जबसम्म नियन्त्रण गर्ने नीति नियम ऐनहरु स्पष्ट हँुदैनन् तबसम्म यो रोकिदैन । यसका लागि प्रदेश सरकारले बलियो शिक्षा नीति ल्याउन आवश्यक छ । यस्तै स्थानीय तहले पनि यसलाई विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ ।
अभिभावक सचेत बन्नु पर्दछ
विद्यालयले विद्यार्थी माग्नु स्वाभाविक नै हो । यसलाई एकदमै नराम्रो हो भन्न मिल्दैन । यदि कुनै पनि निजी विद्यालयहरुले विद्यार्थी भर्नाको विषयलाई लिएर विभिन्न आश्वासन दिने, यो यस्तो ऊ त्यस्तो भन्ने गर्छन् भने त्यसमा सर्वप्रथम अभिभावक सचेत हुन आवश्यक छ । किनभने कोही कसैले भनेकै आधारमा विद्यार्थी भर्ना गराउनु पनि मूर्खता हो । विद्यार्थी माग्दै घरदैलोसम्म पुग्ने विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर, विद्यालयले प्रदान गर्ने सेवा सुविधाका बारेमा समेत अभिभावकले जानकारी लिनु महङ्खवपूर्ण मानिन्छ ।
तर विद्यालयलाई भर्ना अभियानमा नलाग भनेर भन्न मिल्दैन । किनभने सामुदायिक विद्यालयहरु पनि त अभिभावकहरु समक्ष प्रत्यक्षरुपमा विद्यार्थी भर्नाको विषयमा जानकारी दिन सक्छन् । सामुदायिक विद्यालयहरुले विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रमहरु घर–घरमा लैजाने नगरेकाले निजी विद्यालयहरुप्रति आलोचना आएको हो । तर जुन प्रतिस्पर्धा भर्नामा गरिन्छ नि त्यस्तै शैक्षिक गुणस्तरमा पनि गर्न सक्ने हो भने यो सकारात्मक देखिन्छ ।
तर यो एक पक्षमा भने सकारात्मक देखिन्छ । किनभने कतिपय अभिभावक, विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयको बारेमा कुनै पनि जानकारी नहुन सक्छ । विद्यालयसम्म पुग्न नसक्ने अवस्था हुनसक्छ, या त शारीरिक अवस्थाका कारण विद्यालयसम्म गएर विद्यार्थीको भर्ना गर्न नसक्ने अवस्था हुन सक्छ । त्यस समयमा सही सूचना र सेवाका आधारमा अभिभावक, विद्यार्थी र विद्यालयबीचको दूरी कम हुने हुनाले एक पक्षमा यो राम्रो हो । तर कतिपय विद्यालयहरु अनेक सेवा सुविधामा पर्चा हात–हातमा समातेर विद्यार्थी भर्नाका लागि अभिभावकहरुलाई बाध्य बनाउने पनि गर्दछन् ।
कतिपय शैक्षिक प्रमाणपत्रको विषयलाई लिएर जबरजस्ती विद्यालयमा भर्ना लगाउने गर्दछन् । त्यो भने एकदमै गलत हो । किनभने विद्यार्थीले ईच्छाएको विद्यालयमा पढ्न पाउनु उसको अधिकारको कुरा हो । यस्तै अभिभावकहरु पनि कुन विद्यालयमा आफ्ना सन्तानले राम्रो शिक्षा आर्जन सक्छन् ? भन्ने विषयमा ध्यान दिन आवश्यक छ । बोलेका, प्रचार गरेका भरमा विद्यार्थी भर्ना गर्नुहुँदैन । यस्तै विद्यालय अनुमती प्राप्त छ की छैन, पठनपाठनमा सहजता कस्तो छ भनी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा जानकारी लिनु जरुरी छ । यसर्थ भर्नाका विषयमा सबैभन्दा पहिले अभिभावक र विद्यार्थी दुबै सचेत हुनुपर्दछ ।
भर्ना अभियानमा विकृति
यो एउटा नियमित चलिरहने प्रकृया हो । यसलाई विद्यालयहरुले बडादशँैको रुपमा लिने गरेका छन् । यो दाङ जिल्लामा मात्र नभई अन्य जिल्लाहरुमा समेत व्यापकरुपले चलिरहेको छ ।
विद्यार्थी भर्नाका लागि शिक्षक तथा कर्मचारीहरु गाउँ–गाउँमा जाने गरेका छन् । हाम्रो गाउँपालिका पनि विभिन्न योजना अनुसार विद्यालयका शिक्षक, सरोकारवालाहरुको समन्वयमा भर्ना अभियान कार्यक्रम चलिरहेको छ ।
विद्यार्थीको नतिजा प्रकाशनपछि शिक्षक पछिल्लो समयमा भर्ना अभियान कार्यक्रम प्रतिस्पर्धात्मक तरिकाले चलिरहेको छ । तर भर्ना अभियान अभियान जस्तो नभएर विद्यार्थीको संख्या बढाउने उद्देश्यमा केन्द्रित भएको देखिन्छ ।
मेरो विचारमा भन्ने हो भने अहिले भर्नाका कार्यक्रमहरु वास्तवमै विकृति तरीकाले चलिरहेका छन् । आफूले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा र सजताका आधारमा सन्देशमूलक, जानकारीमूलक तरिकाले विद्यार्थी भर्नाका लागि प्रोत्साहन गर्नु राम्रो हो ।
विद्यालयकै बस तथा गाडीहरु लिएर विद्यालय भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको पाइन्छ । यसले समाजमा कस्तो सन्देश पु¥याउछ होला ? त्यसलाई सबैले ध्यान दिन आवश्यक छ । सुरुमा भर्नामा आधारित रहेर विभिन्न सेवामा शुल्क छुट, विभिन्न सेवा उपलव्ध भन्ने तर पछि विभिन्न शीर्षकमा शुल्क निर्धारण गर्दै अभिभावकहरुलाई मारमा पार्ने प्रवृत्तिको भने अन्त्य हुँदैन ।
तर अहिले भर्ना अभियानका आवश्यकभन्दा धेरै अनावश्यक सामाग्रीहरु प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ । आफ्नो शैक्षिक संस्थाहरुको शैक्षिक गुणस्तरको आधारमा नभएर अहिले भर्ना अभियानहरु विद्यालयको तरिकाले भर्ना कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएका छन् ।
मलाई लाग्छ विद्यालयहरुको एकआपसको प्रतिस्पर्धा विद्यार्थीको संख्या बढाउनेतिर होइन, शैक्षिक गुणस्तरतर्फ हुनुपर्दछ । जसले गर्दा विद्यार्थीहरुको संख्या मात्र होइन, विद्यालयको प्रचारसमेत आफै बढ्दै जान्छ ।
विद्यालयको लोकप्रियता पनि बढ्दै जान्छ । तर अहिले त त्यस्तो देखिदैन । विद्यालयकै बस तथा गाडीहरु लिएर विद्यालय भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको पाइन्छ । यसले समाजमा कस्तो सन्देश पु¥याउछ होला ? त्यसलाई सबैले ध्यान दिन आवश्यक छ ।
सुरुमा भर्नामा आधारित रहेर विभिन्न सेवामा शुल्क छुट, विभिन्न सेवा उपलव्ध भन्ने तर पछि विभिन्न शीर्षकमा शुल्क निर्धारण गर्दै अभिभावकहरुलाई मारमा पार्ने प्रवृत्तिको भने अन्त्य हुँदैन । आखिर मारमा अभिभावक जसरी पनि पर्ने गरेका छन् ।
यसर्थ यस्तो प्रकृयाभन्दा आफ्नो गुणस्तरमा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । शैक्षिक वर्षलाई सबै वर्गको पहँुचमा पुग्ने खालको भयो भने मात्र भर्नाले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सक्दछ । होइन भने अनावश्यक सामाग्रीहरु प्रयोग गर्दै भर्ना अभियान सञ्चालन गर्नुको कुनै औचित्य छैन ।
समय अघि नै भर्ना
सामान्यतया भर्ना अभियान विद्यार्थीको वार्षिक परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भईसकेपछि मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने हो । तर यहाँ समय अगाडि नै भर्नाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन भईरहेका छन् । जसले गर्दा समाजमा भर्ना अभियानलाई अभिभावकहरुले महङ्खव दिन छाडेको पाईन्छ । हुन त हाम्रो गाउँपालिकामा त्यत्ति धेरै विद्यालयहरु छैनन् ।
त्यसैले पनि होला भर्ना अभियानका कार्यक्रमहरु व्यापक देखिदैनन् । गाउँपालिकाको मातहतमा रहेका विद्यालयहरुको भर्ना कार्यक्रम भने शिक्षा मन्त्रालयको पत्र अनुसार बैशाख २ गतेबाट सुरु भएको छ । तर कतिपय स्थानहरुमा भर्ना अभियानका कार्यक्रमहरु चैत महिनादेखि नै सञ्चालन भएका छन् ।
विशेषगरी भर्ना अभियान दुई चरणमा गरिनु पर्ने हो । एउटा बैशाख १५ गतेसम्म अनि अर्को बैशाख १६ गतेपछि बैशाख अन्तिमसम्म । तर यहाँ त भन्दा म अगाडि भन्ने धारणा बोकेर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् ।
त्यसले अभिभावकहरुलाई चुप लागेर बस्नु पर्ने अवस्थामा ल्याउँदछ । किनभने त्यो, यो गरेर विद्यालयहरु घरसम्म पुग्ने गर्दछन् । जसका कारण अभिभावकहरु आक्रोसित बन्न पुग्दछन् । विद्यालयप्रतिको आदर्श सोंच, विश्वासमा समेत यसले प्रभाव पार्दछ । यसर्थ समय अगावै विद्यार्थी भर्नाका कार्यक्रमहरुलाई घरदैलोसम्म पु¥याउनु राम्रो होइन धारणा मेरो हो ।
पहिलेदेखि नै चलेको प्रवृत्ति भएर पनि होला कुन समयमा कस्ता शैक्षिक कार्यक्रमले समाजमा कस्तो प्रकारको प्रभाव जमाउँछ ? भन्ने विषयमा कसैले ध्यान दिने गरेका छैनन् । न त कसैलाई अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ न तर हिच्किचावट नै ।
विद्यालयको प्रचार गर्ने तरिकाले विभिन्न सामाग्रीहरु बोकेर, विद्यालय पोशाकसहित सबै सक्रिय भएर लागेका छन् । विद्यालयलाई के कसरी सुधार गर्न सकिन्छ ? विद्यालयमा अभिभावकको निगरानी के कस्तो छ ? विद्यालयले प्रदान गर्ने गरेका शैक्षिक अवस्थाको मापन के कसरी भईरहेको छ ? भन्ने जानकारी तथा प्रतिक्रिया लिन कोही गम्भिर देखिदैनन् ।
विद्यार्थीको तथ्याङ्क संकलनका लागि आवश्यक पर्ने अहिले निजी विद्यालयहरुसँगै क्रमशः सामुदायिक विद्यालयहरु पनि भर्ना अभियानलाई घरदैलोसम्म पु¥याउन लागेको पाईन्छ ।
किनभने निजी विद्यालयहरुसँग सामुदायिक विद्यालयहरु पनि विस्तारै प्रतिस्पर्धा उत्रदै छन् । यसमा भने सबै सकारात्मक हुन आवश्यक छ । तर समाजमा शिक्षाको प्रभाव कसरी जमाउन सकिन्छ ? भन्ने विषयमा पनि विद्यालयहरुले ध्यान दिन आवश्यक छ ।
सेवा सुविधा, सहजता, शैक्षिक सामाग्री र प्रविधिको उपलव्धता, गुणस्तरीय शिक्षा भयो भने विद्यालयहरु घरदैलोमा धाउनु पर्दैन । विद्यार्थी विद्यालय खोज्दै विद्यालयको प्राङ्गणसम्म आफै आउँछन् ।
आजदेखि सेमिफाइनल खेल
नागरिक सचेतनामा जोड
September 10, 2019 epradesh
एक वर्षमा धेरै गरेका छौँ
August 3, 2018 epradesh